स्वस्थ रहन महिलालाई १० सुझाव – आफ्नो समाचार
Afno News — २५ चैत्र २०७५, सोमबार २१:१८0comment
महिला तथा प्रसूति विशेषज्ञ ‘भि फर भेजिना’ पुस्तककी सहलेखिका डा. एलिसा डेकले महिलाका स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न लागि सुझाव दिएकी छन्ः
१. तनाव निर्मूल पार्नुहोस्ः अधिकांश महिला अनावश्यक रुपमा तनाव लिइरहेका हुन्छन्। तनावले प्रजनन् क्षमतादेखि डिप्रेसन, ‘एन्जाइटी’ र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्छ। त्यसैले सकेसम्म तनाव लिनु हुँदैन। तपाईंले लिएको तनावले तपाईंको काम बन्दैन बरु स्वास्थ्य बिगार्छ। आफूलाई तनाव नहुने उपाय खोज्ने र निरन्तर अवलम्बन गर्ने गर्नुहोस्।
३. क्याल्सियम बढी मात्रा नलिनेः शरीरमा धेरै मात्रामा क्याल्सियम भए मिर्गौलामा पत्थरी हुने सम्भावना हुन्छ। साथै, मुटसम्बन्धी रोगको जोखिम पनि बढ्छ। तपाईं ५० वर्षमुनि हुनुहुन्छ भने दैनिक एक हजार मिलिग्राम र ५० वर्षमाथि भए एक हजार दुई सय मिलिग्राम क्याल्सियम भए पुग्छ। यो क्याल्सियम पनि खासगरी भोजनबाट प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नुहाउँदा यस्तो गर्नु गल्ति
बेसार सेवनबाट ६ सयभन्दा बढी रोगको निदान
गोक्यो तालमा बेपत्ता विद्यार्थी खोज्न ‘सबमरीन ड्रोन’को प्रयोग